အမြိုးသမီးမြားရဲ့အိပ်မက်စာအုပ် - အိပ်မက်အတွက်ကြောင်, အဘယျသို့အိပ်မက်အနီ, အနက်, အဖြူ, ကြီးမားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်?
စကားပြန် Dream - ကြောင် - အဘယ်အရာကိုကြောင်အမြိုးသမီးတအိပ်မက်မက်?
ဤအခြင်းနှင့်အခြားတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအိပ်မက်၏အနက်ကိုများနှင့်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအကျိုးဆက်များတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် - ကအိမ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်လမ်းကနေရှိမရှိချစ်ခင်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ကြောင်တစ်ကောင်တစ်ပန်းချီကား: ။ ဒီအနက်ဖွင့်ဒါမှမဟုတ်အိပ်မက်စာအုပ်ပုံကို, ကြောင်အကြောင်းကို Dream
များစွာသောကမ္ဘာကအစဉ်အလာထဲမှာ, ကြောင်ဆန်းကြယ်မှုများတိရိစ္ဆာန်များစဉ်းစားနေသောကြောင်သည်ဟုပင်အကြံပြုချက်လည်းမရှိ, ကျော်လွန်. အခြားကမ္ဘာ၏ကုလားကာနောက်ကွယ်ကိုကြည့်နိုင်ကြသည် - ဤသတ္တဝါများနှင့်အတူတစ်လအနေဖြင့်ကမ္ဘာမြေမှအချိန်တန်တယ်သောတိရိစ္ဆာန်နှင့်အိပ်မက်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အခြို့သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုသယ်ဆောင်။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ကြောင်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအိပ်မက်မက်? အဲဒီမှာအိပ်မက်တစ်ခုအမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်ရန်သူများကို, ဒါမှမဟုတ်လူဆိုးတို့သည်ရှိကြောင်းညွှန်ပြ, ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောဆိုးရွားသောအိပ်မက်ဆက်စပ်မကြာခဏကြောင်အကြောင်းကိုအိပ်မက်။ ဤသူကား - ဤဆောင်းပါးကို fluffy သတ္တဝါများနှင့်အတူအိပ်မက်အားလုံးအသေးစိတ်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်ရှုရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
ကအိမ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ် "အပြင်" ဖြစ်၏
ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြသ ရန်လို သို့မဟုတ်ဒရယ်ငယ်;
အိပ်မက်တစ်ဦးအပြည့်အဝစှဲရဖို့, ကမျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်-အိပ်မက်-စာအုပ်တွေထဲကနေ information ကိုဆွဲရန် သာ. ကောင်း၏:
ရှေးခေတ်အိပ်မက်အနက် - တောက်ပဆံပင်နှင့်အတူအနက်ရောင်ကြောင်နဲ့တောက်ပတဲ့အစိမ်းရောင်မျက်စိမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဝိုင်းရံသွေးဆောင်မှုအကြောင်းကိုထိုမိန်းမသည်ယောက်ျားကို Woman မြင်စေခြင်းငှါသတိပေးလိုက်သည်;
ခေတ်သစ်အိပ်မက်အနက် - အနက်ရောင်ကြောင်သို့မဟုတ်ရေးရာအတွက်ပျက်ကွက်ရန်ကြောင်;
Veles ၏စာအုပ် Dream - အိပ်မက်တွင်ကြောင်တစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်အနက်ရောင်ကြောင်အသေးစားနှင့်အဓိကဒုက္ခကွိုဟော;
Grishina အိပ်မက်အနက်: အိပ်မက်၌တိုက်ခိုက်နေပုံကိုအနက်ရောင်ကြောင်ကြည့်ရှု - အိပ်ဆန့်ကျင် afoot ခဲ့သောကြံစည်မှု, ထုတ်ဖေါ်ရန်။
ဖော်ရွေအနက်ရောင်ကြောင် - ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအလွယ်တကူပြည့်စုံလိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးအခှငျ့သာအချိန်,
အနက်ရောင်ကြောင်အိပ်မက်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လမ်းကိုဖြတ်သန်း - မျှော်လင့်ချက်နှင့်အစီအစဉ်များ၏ပြိုကျ;
အနက်ရောင်ပေါက် - တစ်ဦးအစိုင်အခဲအမြတ်အစွန်း။
လက်တွေ့မှာတော့အဖြူရောင်ကြောင် - က awfully ကောင်းတဲ့ပြတ်သားအဖြူတည်ထောင်ဖွင့်နှင့်အတူတူပင်အိပ်မက်လော ဒါဟာလူအားလုံးနှင့်အားလုံးမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအနက်ရောင်, ဒါပေမယ့်မရတာထက်ပိုပြီးအပျက်သဘောအိပ်မက်၌အဖြူရောင်ကြောင်တစ်ကောင်ရှိပါတယ်, ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအိပ်မက်အတွက်အဖြူရောင်ကြောင်တစ်ကောင်:
အလှမယ် Hasse အိပ်မက်စကားပြန်များက - သူမ၏လက်မောင်းများတွင်အဖြူကြောင်တစ်ခြယ်လှယ်, မည်သည့်အချိန်တွင်အစားထိုးနိုင်သူတစ်ဦးသည်လူပတ်ဝန်းကျင်ရှိကွောငျးကိုဆိုလိုသည်;
အဖြူရောင်ကြောင် - မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌အသက်တာကိုခေတ္တခဏရပ်နားနှင့် lennoy ခြင်းငှါ၎င်း,
Miller က Dream - အဖြူရောင်ကြောင်တစ်ကောင်သိသိသာသာဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖို့အိပ်မက် ဘဏ္ဍာရေးလိမ်လည်မှု ;
ခေတ်သစ်အိပ်မက်အနက်: ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရဲ့အစမှာအဖြူသားမွေးအိပ်မက်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူကြောင်ဒါပေမယ့်လည်းအိပ်မက်ကိုမြင်ညင်ညင်သာသာကြောင် purred stroking လျှင်အရေးပါသောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်;
Medea ရဲ့အိပ်မက်စာအုပ်သူမရဲ့ပတ်ပတ်လည်လူတို့သညျမယုံကြည်သင့်ကြောင်းမယ့်သတိပေးမိန်းမကဲ့သို့အဖြူရောင် fluffy ကြောင်၏အိပ်မက်အနက်ဖွင့်။
ကောက်ကျစ်ခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ရှေးခေတ်ကကတည်းကအရောင်သို့မဟုတ်အရောင်အနီ, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင် - အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့အနီရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်တိရစ္ဆာန်များ၏ဒီတော့ကြောက်လန့်သောလူကကြောင်သို့မဟုတ် fox ဖြစ်ဒါကြောင့်, စွမ်းအင်တစ်ခုအစွမ်းထက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတွင်ဂျင်း fuzzy နှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးနှင့်အတူအိပ်မက်။ စကားပြန်များ၏အမျိုးမျိုးသောထိုကဲ့သို့သောအိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြအောက်ပါအတိုင်း:
ရုရှားအိပ်မက်ထဲကစာအုပ် - အိပ်မက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အနီအရောင်နှင့်အတူကြောင်သူမ၏ရှေးခယျြမှုကြောင့်မမှန်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်အပြောင်းအလဲဖို့လမ်းပေါ်လျှင်,
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အိပ်မက်စာအုပ်: အနီရောင်ကြောင်တောက်ပတစ်ဦးစွန့်စားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စကစားစိတ်ဓါတ်များ, ဒါပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းအိပ်မက်;
အနီရောင်ကြောင်ထုတ်ပယ်ရန် - အသက်တာ၌အပြောင်းအလဲ, ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေး၏ကှဲထှကျသည် ဖြစ်. ,
Miller က Dream - အိပ်မက်၌ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုသေးငယ်တဲ့ redheaded သူ Mike Farley ၏အိမ်တော်ကို run;
ထိုသို့သောအိပ်မက်နှိုး, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်အများအပြားမေးခွန်းတွေအပေါ်အနည်အနှစ်များစွန့်ခွာအမြဲမနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ကြောင်၏အိပ်မက် - ကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်:
သေမင်း၏အရပျကိုကို (အိပ်မက်ကိုမြင်၏အိမ်တော်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားရာအရပျ) ။
Miller က Dream - သူမကတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်သူမအဖြစ်မှန်ဖုံးကွယ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပြီး, ထိုသို့မလိုချင်ပါဘူးဆိုရင်လျှို့ဝှက်ချက်ကစောင့်ရှောက်တာကိုခံရဖို့ထင်ရှားခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားအိုး၌သွင်းသော်လည်းအရာအတွက်အိပ်မက်;
မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်စာအုပ် - ဘဝ၏နေမကောင်း-wisher ၏ပျောက်ဆုံးမှုအတွက်သေလွန်သောသူတို့သည်ကြောင်ကြည့်ရှု;
အိပ်မက်၌သေလွန်သောသူတို့သည်ပေါက် - ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏အောင်မြင်သော resolution ကို;
ခေတ်သစ်အိပ်မက်အနက်: အပြုသဘောမိန်းကလေးသည်မိမိအိမ်ရဲ့အိမ်တံခါးပေါ်တွင်အသေကောင်ကြောင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်၏အသွင်အပြင်သည်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူသဘောထားကှဲလှဲမှုမြား၏ကာလအတွင်းကြောင်းအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးခန့်မှန်း - ကမိသားစု idyll ဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြီးမားတဲ့အနက်ရောင်ကြောင်၏အိပ်မက်အဘယ်ကြောင့် - တစ်မကြာခဏမေးခှနျးအတှကျ, ဒီအရောင်တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများနှင့်ကံမကောင်းနှင့်အတူသတိလစ်အတွက်ဆက်စပ်နှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရောင်တိရစ္ဆာန်များ၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်သည်ကို ထောက်. - ထိုသို့သောအိပ်မက်မဖြေရှင်းနိုင်သေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီကပိုအရေးကြီးပါတယ်အဖြစ်အားလုံးကတော့စကားပြန်၏, အထူးသကြောင်တစ်ဦးထူးထူးခြားခြားကြီးမားသောအရွယ်အစားအရောင်ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်ရှုထောင့်ပေါ်အိပ်မက်ကိုမြင်အလေးပေး။ ကြီးမားတဲ့ကြောင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်အမျိုးသမီးများအိပ်မက်, ၏အနက်ကို:
မိသားစုအိပ်မက်စာအုပ် - ကြီးတွေ, overfed ကြောင်ဖြုန်းနှင့်ဝယ်ယူမှုဖို့အိပ်မက်;
ဘာသာရေးအိပ်မက်စကားပြန် - သော authoritative, Dominic လူနှငျ့အတူတွေ့ဆုံ;
sonnik Tsvetkova - ကြီးမားတဲ့အနက်ရောင်ကြောင်တစ်အစွမ်းထက်ရန်သူနှင့်အတူတစ်တိုက်မှုဟောကိန်းထုတ်;
အိပ်မက်ထဲတွင်ကြီးမားသောကြောင်အစာကျွေး - သြဇာလူတို့နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်အိပ်မက်အကျိုးပြုစိတ်ကြောင်နဲ့ကြောင်လျှင်တိရိစ္ဆာန်များရန်လိုစိတ်ရှိရာတစျခုထက်ပိုမျက်နှာသာအိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဘာအိပ်မက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသည့်အခါအဘို့အကြည့်ဖို့, ဒီအိပ်မက်စာအုပ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအနက်ကိုဘော်ပြ, ဒါကြောင့်သင်ကပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာရဖို့, ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုလက်နက် ပြု. သုံးစွဲသင့်ပါတယ်:
Gypsy အိပ်မက်စကားပြန် - လူအတော်များများကြောင်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများကို၏သတိပေး meow;
အမြိုးသမီးအိပ်ဘို့အင်္ဂလိပ်အိပ်မက်စာအုပ်သူမ၏အပေါ်သူမ၏အကြိုက်ဆုံး cheat ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူသတိပေးအဖြစ်ကြောင်ကာပိုး, ထုတ်ဖော်ပြသ;
ကြောင်နက် intrapersonal ပဋိပက္ခအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြန်၏ထပ်ခိုးထဲမှာရပ်ကြီးဖြစ်ကြောင်းအိပ်မက်မက်;
, mangy ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်အိပ်မက်တွင်ကြောင်ဒဏ်ရာရ - မိသားစုမိသားစုများထဲမှနေမကောင်းဖြစ်ပြီး, ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုစီးရီး၏ရပ်စဲထားပြီးလျှင်, အဘယ်သူမျှဘယ်လောက်ပဲထူးဆန်းပြန်လည်နာလန်ထူရန်,
ကံနှင့်များ၏အကြီးအအိပ်မက်မှကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်ကြောင် အောင်မြင်မှု ။
ကြောင် - တိရစ္ဆာန်ဆန်းကြယ်မှုများနှင့်ပင်ကအိပ်မက်၌စကားပြောဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုသင့်ကြောင်း, ဖြစ်ကောင်းမြင့်မားပါဝါငါသည်ပညာရှိ၏ဟုအကွံဉာဏျသို့မဟုတ်အကြံပေးချက်များအချို့ကိုမျိုးပေးဖို့လိုသည်။ မိန်းမတို့အဘို့ကြောင်ပြောနေတာအကြောင်းကိုအိပ်မက်တွင်အောက်ပါဆိုလိုပေမည်:
Fel အိပ်မက်စကားပြန် - တစ်ပြောနေတာကြောင်လိင်နယ်ပယ်ထဲမှာရရှိလာတဲ့ပြဿနာများကိုညွှန်ပြ;
Lofa အိပ်မက်စကားပြန် - ညင်ညင်သာသာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကောင်းသောမိတ်ဆွေပေါ်ပေါက်ရေးစကားပြောကြောင်တစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်;
Meneghetti sonnik - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိပ်မက်ပြောစတင်ခဲ့ပြီး, သင်မိတ်ဖက်ဖို့အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စွမ်းအင်ကိုဆွဲတစ်ခုစွမ်းအင်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နိုင်ပါတယ်;
, ကျူးကျော်ရန်ပင်တိုက်ခိုက်မှုပြောနေတာအိပ်မက်အတွက်ကြောင် - အဖြစ်မှန်အတွက်စီစဉ်ထားအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းထင်ဟပ်ဖို့အခါသမယ, ဤအရည်အသွေးတွေကိုပြသနိုင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ကြောင်နှင့်အတူအိပ်မက်နှင့်ဒါအပြုသဘောထက်အပျက်သဘောဆောင်သော connotation သယ်ဆောင်ရန် ပို. များနှင့်တိရစ္ဆာန်နေဆဲလှေးနှင့်အတူတွားနှင့်ဤအားဖြင့်လက်ကမောက်ကမခံရဖို့မထိုက်မတန်လျှင်။ ဒါဟာကနဦးအဖြစ်မကောင်းတဲ့ရှုမြင်ခြင်းရှိမရှိဒါ - ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်ထံမှအိပ်မက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းရန်အချိန်:
Tsvetkova sonnik - အမြတ်အစွန်းများ blohasto ကြောင်အိပ်မက်, ဒါပေမယ့်အိပ်မက်ထဲတွင်ဆန့်ကျင်ပေါ်, ပေါ်လှေးဖျက်ဆီးဖို့စတင်ပါလျှင် - ဆုံးရှုံးမှုခြင်းငှါ၎င်း,
Lofa အိပ်မက်စကားပြန် - ကလူစိမ်း၏ဘဏ္ဍာရေးအောင်မြင်မှုရဲ့စပ်လျဉ်းငြူစူခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်နာမငြိမ်ထုတ်ဖော်ပြသသောအနေဖြင့်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ကိုက်လှေးကြည့်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး, သည် ဖြစ်. ,
အိပ်မက်အနက် Vanga ကသုခချမ်းသာပစ္စည်းကြောင်းအကြံပြု - အဘယျသို့အိပ်မက်အဆီကြောင်နှင့်ပင်လှေး;
ကြောင်တစ်ကောင်၏နှုတျသီးပေါ်ခွေးလှေး - လာမည့်ပွဲခံခြင်းနှင့်ထိုင်-ပတ်ပတ်လည်စုရုံး;
ခေတ်သစ်အိပ်မက်အနက်ကို - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ရက်ရောမှုမှသူမ၏စိတျအပိုငျးကိုလေ့ကျင့်ဖို့လှေးအိပ်မက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးကြောင်ကယ်တင်ရန်သူမ၏ရန်အလွန်ကောင်းသောမဟုတျကွောငျးလုပ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကြောင်၏အိပ်မက်တစ်ဦး mouse ကိုဖမ်းမိ?
ကြောင် - တိရိစ္ဆာန်သည်သူ၏အမဲလိုက်သောငှက်များသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ဖို့စိတျဝငျစားကြွက်များအတွက်မတော်မတရား, ဒါကြောင့်လျောက်ပတ်ပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝ၌တည်ရှိ၏။ အိပ်မက်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာ connotation အမဲကြောင်စကားပြန်၏အတွင်းရှာဖွေနေသဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည်သမုတ်သော Do:
အစ္စလာမ့်အိပ်မက်အနက်ကို - ထိုကြောင်ကောင်းသောကံများနှင့်ဘဝပျော်မွေ့ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခု mouse ကိုအတိတ်နိမိတ်ဖမ်းမိ;
Freud sonnik interprets ကြောင်လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သရုပ်တဲ့သဘောထားကိုအဖြစ် mouse ကိုဖမ်းမိသော, တစ်ခါတစ်ရံအိပ်မက်အိပ်မက် adrenaline နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်းညွှန်ပြအိပ်;
ပြင်သစ်အိပ်မက်ထဲကစာအုပ် - ထိုကြောင်မောက်ဦးသေဆုံးနှင့်သူမ၏ပြပွဲအိမ်ရှင်မအိပ်မက်ကိုမြင်အနတ္တ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြသယ်ဆောင်;
Miller က - ထိုမိန်းကလေးတစ်ဦး mouse ကိုအမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးကြောင်တွေနဲ့အိပ်စက်ခြင်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကလူကအန္တရာယ်အန္တရာယ်အကြောင်းသတိပေးသည်။
ဒီ incipient ရောဂါတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် - အိပ်မက်ထဲတွင်တိရိစ္ဆာန်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ကျူးကျော်၏ပေါ်ထွန်းခြင်း, အထူးသဖြင့်ကြောင် - ကြောင် diagnosticians ရောဂါများလူသိများပြီးအချို့အရပျ၌အာရုံစိုက်ဖို့အခါသမယကိုက်ကြောင့်အိပ်မက်အနက်ဥပမာ, ဘယ်မှာကိုက်ကြောင်အချို့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခွားသောအိပျပျြောအနက်:
Fel အိပ်မက်ထဲကစာအုပ် - ထိုကြောင်အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ယာယီအခက်အခဲများအားမိမိအိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကိုက်ခံခဲ့ရ;
sonnik Freud အိပ်စက်ခြင်း, လိင်ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ်ကျသော fluffy ကိုခြစ်, အနက်ဖွင့်,
ကြောင်ခြေထောက်မှာကိုက် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြဿနာနှင့်တကွ, ကြောင်လက်ညှိုးကိုက်လျှင်မူကား, အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယိုယွင်းပျက်စီးလာကိုမျှော်လင့်မနေသင့်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုမှကိုက်လက်နက်။
ရှေ့ဆက်ကိုက်ခြင်းနှင့်ခြစ်နှင့်အတူ, ကြောင်, hissing အော်ဟစ်, တိုက်ခိုက်ခြင်းအိပ်မက်မက် - အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်စဉ်းစားရန်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားထင်ဟပ်စေတဲ့ကြေးမုံသောကြောင့်ထိုသို့အခြားသူများမှမှန်းချက်ရဲ့များအတွက်အခါသမယ။ စကားပြန်၏အိပ်မက်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြော:
ရှေးခေတ်အိပ်မက်အနက်ကို - ထိုဘေးဥပဒ်ကြောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများဖို့အိပ်မက်;
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အိပ်မက်စာအုပ် - သစ္စာဖောက်တဦးတည်းကိုခစျြ ;
ဆိုးယုတ်ကြောင်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း - ရောဂါရန်,
အိပ်ပျော်အတွက်ကြောင်တိုက်ခိုက် - ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ရန်သူများကိုသို့မဟုတ်ဝေဖန်ထားခြင်းရှိပါသည်။
သုခချမ်းသာများအိမ်ပြန်ဘို့ပန်းပွင့် - နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို
မျိုလသာဆောင်မှပျံသန်း - နိမိတ်လက္ခဏာကို
အဆိုတော် Rihanna စက္ကူမဂ္ဂဇင်း» "saucy နံပါတ်များကို၏အဖုံးချီးမြှောက်ခဲ့
Cutlets oat အလွှာ
Succinic အက်ဆစ် - Panacea သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ Effect?
အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်သစ် Justin Bieber ကိုမွတ်စ်လင်နိုင်ငံများ၌ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်
ကျောက်ကပ်ကျောက်များ - ကုသမှု Tablets, ကျောက်ခဲတို့ကိုချိုး
Battery ကိုအတွက်ဂေါ်ဖီထုပ် - crispy မုန့်စိမ်းအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Britney Spears တစ်ဖန်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြထားပါတယ်
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ - ကယ်လိုရီ
Rybnik - စာရွက်
Long ကဆင်းအကျီအမျိုးသမီးတွေ 2015-2016
ကိတ်မုန့် custard နှင့်အတူ "နပိုလီယံ" - တဲ့ဂန္စာရွက်
အိမ်မှာ facial သန့်စင်